Ny lamba volotsangana dia vita amin'ny kofehy volotsangana. Fantatra amin'ny sanda ara-drafitra hazo ny volotsangana; na izany aza, ny haitao farany teo dia afaka namorona fitaovana vaovao avy amin'ny volotsangana izay kofehy / kofehy. Ny kofehin'ny volotsangana mihitsy dia fitaovana vaovao fa ny indostrian'ny kiran dia nanomboka nampifangaro azy tamin'ny fitaovana hafa toy ny firafitry ny lamba toa ny spandex. Ny volotsangana dia potipotehina kely alohan'ny hamoahana ny anzima voajanahary ary hisitrika rano ary hanasana azy io mba hanapotehana ny tampon'ny fibre volotsangana.
Akanjo spandex vita amin'ny landihazo sy volotsangana dia vita amin'ny akora organika sy ho fampiononana. Izy ireo dia fitaovana ara-organika avokoa ka tena ilaina amin'ny akanjo fanatanjahan-tena satria miaina sy mifoka hoditra. Ny fikororohana dia tsy hampahory ny hoditra, raha ny tena izy, hakeloka ny hatsembohana izany ary maina vetivety izy ka tonga lafatra ho an'ny atleta sy maro hafa. Sportek dia manana fehin-kibo vita amin'ny landihazo sy volotsangana spandex, toerana mety indrindra hahitana ny endrika tonga lafatra miaraka amin'ny kalitao avo lenta.
Izy io dia voajanahary ary manana toetra miasa be dia be mahatonga azy io ho sarobidy tokoa, sady anti-bakteria ihany koa. Ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny lamba volotsangana dia manana fananana manohitra bakteria sasany amin'ny aretina sasany toy ny Staphylococcus aureus sy Escherichia coli. Ka tena miaro ny hoditra amin'ny tontolo masiaka izany. Izy io dia sosona tonga lafatra ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena any ivelany izay misy masoandro, rano ary ala be dia be. Ny fihaonana amin'ny sosona jersey spandex volotsangana dia hiaro anao amin'ny aretin-koditra avy amin'ny tontolo iainana.